Efitra fandraisam-bahiny mametraka efitrano fandraisam-bahiny - Mpivarotra, mpamatsy, efitrano fandraisam-bahiny Sina
YF-H-807 Italianina ankehitriny Lacquered Designer Chest Of Drawers
Famolavolana kely nefa kanto izay ambonin'izany rehetra izany dia manolotra fomba faran'izay tsara sy mifantoka amin'ireo atitany manavaka.
Jery ​​iray, iray mikasika dia ampy hahafantarana ny tena kalitao. Manaporofo izany ny famolavolana manokana, ireo fitaovana voafantina tsara…
YF-H-806 60 Inch Sideboard Buffet 4-Door Sideboard latabatra an-dakozia
Antso malefaka: Voasokitra miaraka amina tsipika geometrika sy tantanana vita vita volamena, ity kabineta sideboard ity dia manana antso mahaliana sy manintona. Endrika kely…
Sady fitahirizan-javatra lehibe ho an'ny efitrano fisakafoanao no toerana hanehoana fizarana sakafo hohanina na zava-pisotro…
YF-H-802 takelaka fitaratra antonony ho an'ny lakozia
Miaraka amin'ny faran'ny gloss fotsy avo tsara tarehy, tsipika tsotra madio ary miavaka amin'ny famolavolana ankehitriny, ity sideboard azo ampiharina sy mahavariana ity dia manolotra habaka fitehirizana sy fototra tonga lafatra mba hampisehoana ny fahitalavitra na ireo zavatra haingon-trano.
YF-H-801 Kabinetra fisakafoanana an-dakozia an-dakozia amin'ny volamena
Ny tsiroaroa vita amin'ny hazo matevina sy vita vita amin'ny vy tsy misy fangarony amin'ny famaranana volamena mba hahazoana antoka asa maharitra mandritra ny taona maro.
YF-H-802-2 Buffet mainty latabatra 2 varavarana & 3 vatasarihana
Manasongadina fotodrafitrasa vita amin'ny vy tsy misy fangarony volamena ity kabineta sideboard mahavariana ity dia manolotra fikitihana lamaody sy amin'izao vanim-potoana iainanao izao.
YF-H-805 Buffalo marbra mpamorona marbra Italiana avo lenta
Ity sideboard ity dia misy silhouette be pitsiny miaraka amin'ny vatan'ny vy tsy misy fangarony izay manatsara ny efitrano misy fanintonana lafo vidy.